2 qof oo rayad ah oo goor dhawayd lagu dilay Galkacyo & dableyda gaystay dilalka oo lagu raad joogo. – Radio Daljir
2 qof oo rayad ah oo goor dhawayd lagu dilay Galkacyo & dableyda gaystay dilalka oo lagu raad joogo.
Luulyo 17, 2010 12:00 b 0
Galkacyo, July 17 – Koox dabley ah ayaa gelinkii dambe ee maanta toogasho ku dilay 2 dhallinyaro ah bartamaha magaalada Galkacyo. Ciidanka bilayska ayaa sheegay in ay ku raad joogaan daleyda falal dambiyeedka gaystay. Lama oga waxa sababay dilalka in kasta oo dad qaar ay sheegeen in ay u eg yihiin aano qabiil …
Talo ku wajahan shirka NSUM (Northern Somali Unionist Movement) ee St. Paul / Minniapolis, MN – Axmed M Xassan.
M/weyne Shariif oo cambaareeyey qaraxyadii Kampala, bidhaamiyey baahida ciidamo shisheeye & in ciidanka AMISOM ay u yimaadeen si ay u caawiyaan Somalida.